Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၁၈)
“စိဥ္မ္ဇမာန် ကိစ္စကိုလည်း ကြည့်ပါဦး၊ သိကြားမင်းက စိဉ္ဇမာန် ထမိန်အတွင်းဝင်ပြီး ကြွက်ယောင်
ဆောင်ပြီး ကိုယ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်၊ သိကြားတန်မဲ့ မိန်းမထမီအတွင်း ၀င်ရသတဲ့ လားဗျာ… ထမီတွင်း
ဆိုတာဟာ သာမန်လူယောက်ျားများ ၀င်ရင်တောင် ဘုံးကျက်သရေ ပျက်တယ်လို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက
ယူဆထားတာနဲ့ တက်တက်စင် ကွာဟနေပါတယ်။ ဂေါတမရှေ့မှာ တရားနာနေတဲ့ ပရိသတ် ဗိုလ်ပုံ
အလယ်မှာ မိန်းမတွေအများကြီး ရှိနေနိုင်ပါလျှက်နဲ့ အဲဒီမိန်းမကြီးတွေက ဗိုက်ကိုတော့ထမစမ်းပါပဲနဲ့
ဧရာမနတ်တို့ဘုရင် သိကြားမင်းက လာပြီး ကိုယ်တိုင် ထမိန်ထဲ ၀င်ကိုက်ရတယ်ဆိုတာကလည်း
ယုတ္တိမတန်ပါဘူးဗျာ..”။“ပြီးတော့ နန္ဒောပနန္ဒ နဂါးမင်း ချွတ်ခန်းဆိုတာ ကြည့်ပါဦး၊ ဘုန်းတော်အနန္တ, ဉာဏ်တော်အနန္တ,တန်ခိုးတော်အနန္တဆိုတဲ့ ဂေါတမဟာ သူကိုယ်တိုင်တော့ နဂါးကို ရင်မဆိုင်ရဲဘဲနဲ့ တပည့်ဖြစ်တဲ့အရှင်မောဂ္ဂလာန်ကို နှိမ်နင်းခိုင်းရတာလ?ဲ အရှင်မောဂ္ဂလာန်က သူ့ထက်ပိုပြီး တန်ခိုးရှိရာ ကျမနေဘူးလား၊အ၀ိဟိံသာ - သူတစ်ပါးကို မညင်းဆဲရဘူးလို့၊ ဟောပြောနေတဲ့ ရှင်ဂေါတမဟာ ဘာ့ကြောင့် နဂါးကိုညင်းဆဲခိုင်းရသလ?ဲ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်ရတဲ့ ရဟန္တာ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ဟာ နဂါးကိုဘာ့ကြောင့် မြင့်မိုရ်တောင်နှင့် ဖိညပ်ပြီး နှိပ်စက်ရတာလ?ဲ အဒဲီလို တန်ခိုး အင်မတန်ကြီးတဲ့ အရှင်မေ ဟာမောဂ္ဂလန်ကို ဘာတန်ခိုးမှမရှိတဲ့ ခိုးသားတွေက ရကိုသတ်သတဲ့ဗျာ၊ တန်ခိုးတွေဘယ်ရောက်ကုန်သလ?ဲ ဘယ်လောက်ယုတ္တိကင်းမဲ့သလ?ဲ ရှေ့စကားနှင့် နောက်စကား မညီဘူးဆိုတာတွေ့ကြပြီ မဟုတ်လား?”။
ဦးသာဒင်သည် ပရိသတ်ကို မေးခွန်းထုတ်သလိုလုပ်၍ ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်တင်ပြပြန် လေသည်။
“ဒီတန်ခိုး ပြာဋိဟာ ကိစ္စပ၊ဲ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ပေါ့ဗျာ… ရှင်မောဂ္ဂလာန်နဲ့ ရင်ှပိဏ္ဍောလတို့ စဏ္ဍကူး
သပိတ်ရဖအို့ တွက်တန်ခိုးပြကြတယ်တဲ့။ အဲဒါ ဂေါတမဘုရားက ကြားသိတော့ရဟန်းတွေတန်ခိုးမပြရ၊
ပြလျှင် အာပတ်သင့်စေလို့ ပညတ်ပါသတဲ့၊ အဲဒီလို သူများတွေကို ပညတ်ပြီး သူကတော့ တိတ္ထိတွေနဲ့ ပြိုင်ပြီးရေမီးအစုံ တန်ခိုးပြသတဲ့ဗျာ…၊ အဒဲါဆို ဂေါတမဘုရားဟာ “ငါပြော သလိုလုပ်ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့” ဆိုတဲ့ဘုရားမျိုး ဖြစ်မနေဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ “တထာဂတ (အပြောနှင့်အလုပ်ညီညွတ်တယ်)”ဆို၊ခုနကအတိုင်းဆိုလျှင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဘုရားကြီး ဂေါတမဟာ “တထာဂတ”ဘွဲ့နှင့် ထိုက်တန်ပါသလား?“တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကို တက်တာ တန်ခိုးနဲ့တက်တယ်ကွာလို့ဆိုရင် ဟုတ်တုတ်တုတ် ရှိသေးရဲ့၊အခုတော့ နှစ်လမ်းသုံးဖ၀ါးနဲ့ တက်တယ်တဲ့ဗျ၊ ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ နတ်တွေက ရွှေစောင်းတန်း၊ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တမြားစောင်းတန်းတွေဖန်ဆင်းပေးရသတဲ့၊ တန်ခိုးမရှိတော့ပြန်ဆင်းဖို့ မရဲဘူး
ထင်ပါရဲ့ဗျာ..”“အဒဲီအောင်ခြင်းရှစ်ပါးမှာပဲသစ္စကပရဗိုဇန်ှင့် ၀ါဒပြိုင်ပွဲမှာ ဂေါတမဘုရားက မေးတာကို သစ္စကကြီးကမဖြေဘူးတဲ့ …။ အဲဒါ သိကြားမင်းက ဘီလူးယောင် ဖန်ဆင်း၊ တင်းပုတ်ကြီးနဲ့ ချိန်ရွယ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တော့မှသစ္စကကြီးက ဖြေသတဲ့ဗျာ….၊ အဒဲါယုတ္တိရှိပါသလား ..? ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့သိကြားလောက်တောင်တန်ခိုးမရှိလို့ သိကြားကို အကူအညီတောင်းတာလား? သိကြားက လာပြီးကူညီရတာလား ……?၊ ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေတဲ့ တန်ခိုးတော်အနန္တဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ဘုရားမှာ မရှိလို့သာ သိကြားက လာကူရတာပါလို့ပြောရင် ကျွန်တော့ကို အလွန်လို့ဆို မလား?။
“နောက်တစ်ခု ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခန်းမှာ ကြည့်ပါဦး၊ ၀မ်းတော်လားလို့ အားကုန်နေတဲ့
အသက်ရှစ်ဆယ်အရွယ် ဂေါတမဘုရားဟာ ကုသိနာရုံရောက်အောင် ရှင်အာနန္ဒာက တွဲခေါ်ပြီး
ခြေလျှင်သွားရတယ်၊ ဘုရားရဲ့တန်ခိုးတွေဘယ်တွေရောက်ကုန်လို့ ခြေလျှင်သွားနေရတာလ…ဲ .?၊ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကိုတောင် နှစ်လမ်းသုံးဖ၀ါးနှင့် အရောက် တန်ခိုးတော်နှင့် သွားနိုင်တယ်ဆို ဒီကုသိနာရုံ ကျကာမှကုန်းကြောင်း လျှောက်နေရသလား…..?၊ ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတဲ့ နတ်တွေတစ်ယောက်မှမလာပါလား?၊ မကူညီပါလား၊ ဘယ်သွားနေကြသလ?ဲ ၊ ကုသိနာရုံရောက်တော့မှစက်ြဝဠာ တစ်သောင်းကနတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ရောက်လာသတဲ့၊ သားမွေးတစ်ချောင်းလောက် နေရာမှာ နတ် (၁၆)ယောက်လောက်မြူမုံလောက် ဖန်ဆင်းပြီး နေရသတဲ့ဗျာ… အဲဒါတွေဟာ ယုတ္တိ ရှိပါသလားဗျာ ….?။
“စိန္တိတံ သတ္တသင်္ချေယံ န၀သင်္ချေယျ ၀ါစကံ”တဲ့ ဘုရားဖြစ်ခြင်လို့ “စိတ်နဲ့ ကြံစည်တွေး တောနေရတာ
ခုနှစ်သင်္ချေကြာသတဲ့, နှုတ်က မြွက်ဆို ဆုတောင်းရတာကပဲ ကိုးသင်္ချေ”ကြာသတဲ့ဗျာ……၊ ပြီးတော့
ဘုရားတစ်ဆူက ဘုရားလောင်းတစ်ဦးကို ဗျာဒိတ်ပေးမှ ဘုရားဖြစ်သတဲ့၊ အဲဒါဆိုရင် ပထမဆုံးဘုရားကို
ဘယ်သူက ဗျာဒိတ်ပေးသလဲဗျာ ….၊ ဖြေစမ်းပါဦး၊ အဲဒါတွေစဉ်းစားဖို့ မသင့်ပေဘူးလားဗျာ…….”။
“နောက်တစ်ခါ ….၀ိပါက်တော် မကင်းသေးတဲ့အတွက် ဒေ၀ဒတ်က ကျောက်မောင်းဆင်ချတာ ခံရလို့
ခြေမတော် သွေးချေဥတယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ အချက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ၀ိပါက်တော်(၁၂)ပါးဆိုတာ
ဘုရားဖြစ်ပြီးမှကို ခံရသေးသတဲ့။ အဲဒီအချက်ဟာ အလွန်စဉ်းစားဖို့ ကောင်းပါ တယ်ဗျာ ……”။
“ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဟာ ဗောဓိပက္ခိယတရား(၃၇)ပါးလို့ အဆိုရှိပါတယ်။ အဲဒီ
(၃၇)ပါးထဲမှာ သမ္မပ္ပဒါန် လေးပါးဆိုတာ ပါပါတယ်။ လုံ့လအားထုတ်ကြိုးပမ်းရမယ့် ၀ီရိယရဲ့ အင်္ဂါလေးပါးမှာဥပ္ပန္န-အကုသိုလ်၊ အနုပ္ပန္န-အကုသိုလ်၊ နှစ်ပါးနဲ့ ဥပ္ပန္နကုသိုလ်၊ အနုပ္ပန္နအကုသိုလ် နှစ်ပါးစီ ခွဲထားပါတယ်။ဥပ္ပန္န- အကုသိုလ်ဆိုတာ အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကို ပယ်စွန့်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရခြင်း အလုပ်လို့၊ဆိုထားပါလျှက်နှင့် ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ရှင်ဂေါတမဟာ ကိုယ်ဟောတဲ့တရားထဲက ဥပ္ပန္န-အကုသိုလ်ကိစ္စကိုပင် ပြီးမြောက်အောင် မစွန့်ပယ်နိုင်သေးလို့သာ ဒေ၀ဒတ်ကျောက်မောင်းဆင်တဲ့ဒဏ်ခံရတာ ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလှပါတယ်၊ ဘုရားဆိုပြီးတော့ ဒေ၀ဒတ် ကြိုတင်ကြံစည်တာကိုမှ
မသိဘူးလားဗျာ…. ပြီးခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ဝဋ်ကိုမှ ကုန်စင်အောင် ဥပ္ပန္နကိစ္စ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ဂေါတမဘုရားကိုဘုရားလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲဗျာ …..”။
ဤနေရာသို့ အရောက်တွင် ရဟန်းတော်များမှာ ခေါင်ငုတ်၍သာ နေရတော့သည်။ ခရစ်ယာန်
ပရိသတ်များ အားတက်နေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပရိသတ်ကား တွေဝေနေသည့်ဟန်၊ အမူအရာများ
ပေါ်နေလေသည်။ ဦသာဒင်ကိုယ်တိုင်လည်း အားတက်လာပြီး ပိဋကတ်ကျမ်းစာပါ အချက်အလက်တချို့ကို
တိုက်ခိုက် ဝေဖန်သည်၊ သို့သော် သူတင်ပြသော အချက်အလက်အများစုမှာ အာလံက မြ၀တီဆရာကြီး
ဦးအုန်းနှင့် ဇာတ်တိုက်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များသာဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်၊ နတ်မှီဆရာတော်
“ဦးအုန်းပြောလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါလား ကိုယ်တော်၊ ဦးအုန်းကို ကျေးဇူး တင်ရမယ်နော်”ဟု
ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌအား တီးတိုးကပ်၍ ပြောကြားလိုက်ရာ ဆရာတော်က ခေါင်းညိတ်ပြီး ပြုံးနေသည်၊
ဦးသာဒင်ပြောသမျှကိုလည်း အကျဉ်းချုပ်လိုက်၍ မှတ်နေသည်။ ဦးသာဒင်၏ တင်ပြချက်များကို
ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပိဋကတ်စာပေကို တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ရင်ကျေး၍ ပြေပြစ်သည့်
စကားများကို အများဆုံးသုံးနှုန်းသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ထ့ေို နာက်ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်၊ ဂရုဏာတော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏ မေတ္တာတော်များကို
ဆက်လက်ဟောပြောလေသည်။ အချိန်စေ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘာပတိက သတိပေးလိုက်သောအခါ
ဦးသာဒင်က ဤသို့ နိဂုံးချုပ်လိုက်လေသည်။
“ကျွန်တော်ဟာ မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း တကယ်
ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုလို ယုတ္တိကင်းမဲ့တဲ့ ရှေ့နောက်မညီညွတ်တဲ့ တရားတွေ တွေ့လာရတာနဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ပျက်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲကို ၀င်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဟုတ် မဟတ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို
ဆက်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေသမျှ အမှားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့နောက်မညီညွတ်ဘဲမှားယွင်းချွတ်ချော်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို ယုံကြည် ကြမည်လား ……?၊ မှန်ကန်သော ခရစ်တော်၏တရားများနဲ့ ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြမလား…..?ဆိုတာ ကျွန်တော်က ပရိသတ်ကိုမေးမြန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ…
“အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင်တို့အား ကောင်းချီး မင်္ဂလာ ချီးမြှင့်ပါစေ
ဦးသာဒင်၏ စကားအဆုံးတွင် ကောင်းချီးသြဘာပေးလိုက်သော ခရစ်ယာန်ချင်းပရိသတ်၏ လက်ခုပ်သံကား
မြည်ဟီး၍ ထွက်လာပါသည်။ဦးသာဒင် ဆင်းသွားပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဘာသာသဘာပတိ တောင်ငူမြို့ လောကုတ္တရာဆရာတော်ကအရှင်ဥက္ကဋ္ဌအား ပင့်ဖိတ်လိုက်လေသည်။